Puntland oo dib ugu celisay Muqdisho Markab mucaawino sida oo dowlada dhexe u soo dirtay – idalenews.com
Puntland oo dib ugu celisay Muqdisho Markab mucaawino sida oo dowlada dhexe u soo dirtay
Qaar kamid ah Wasiirada xukuumada Puntland oo maanta ku shiray Garowe ayaa shaaca ka qaaday inay go’aansadeen inay dib u celiyaan Markab sida Deeq Raashin oo laga keenay dalka Turkiga, kaasi oo loo waday degmooyinka Iskushuban, Taleex iyo Goldogob
Markabkan oo dhawaan deeq Raashin keenay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu hada qeybta loogu talo galay deegaanada Puntland inuu usoo qaaday dhinaca dekkada Bosaaso. Balse xukuumada Puntland ayaa sheegtay inay dib u celineyso raashinkaasi oo ah mid ay keentay hay’ada BISHA CAS ee laga leeyahay dalka Turkiga
Wasiirada maanta ku shiray Garowe ayaa waxay kala ahaayeen Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdullahi Ilkajiir, Wasiirka Maaliyada Faarax Cali Shire, Wasiirkada Dekkadaha Siciid Maxamed Raage, Wasiirka Amniga Khaliif Ciise Mudan iyo Wasiirka Warfaafinta Axmed Shiikh Jaamac.
Shirkan ayaa warsaxaafadeed laga soo saaray uu saxaafadda u akhriyey Wasiirka Warfaafinta Puntland Axmed Shiikh Jaamac oo ka hadlay sababaha ay dib u celineyso Puntland Markabka Turkida, iyagoo ku tilmaamay arrintan Farogelin uga timid dhinaca dowlada Federaalka Soomaaliya.
Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili dowlada Puntland sheegtay inay xiriirka u jartay xukuumada Federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho, balse waxaan weli cadeyn sababta deeqda raashinka ah ee Turkiga ka yimid dib loo ceshay, iyadoo aan lagala tashan deegaanadii loo waday.
“…Deeqdan Raashinka waa mid siyaasadeysan oo la isaga horkeenayo shacabka Puntland…” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka Puntland.
Inkastoo dowlada Puntland ay sheegtay in arrintan ay tahay mid laga soo maleegay Muqdisho, deegaanada loo waday yihiin meelaha sida weyn looga dhaaliilo wax qabad la’aanta xukuumada Puntland.
Deegaanada Raashinka loo waday ayaa kamid ah deegaano aysan dowlada Puntland gacanta ku hayn sida Taleex ee gobalka Sool, halka degmooyinka Iskushuban (Bari) iyo Goldogob (Mudug) ay kamid yihiin degmooyinka sida weyn looga diidan yahay xukuumada uu hogaamiyo Madaxweyne Faroole.
Dowlada Puntland ayaan sheegin wax kale oo deeq ah ama waxqabad ah ugu bedali doonaan degmooyinka la sheegay in loo waday deeqdan raashinka. Markabkan la ceshay ayaa sidoo kale qeyb kamid ah raashin u siday degmooyinka Beledweyne iyo Matabaan ee gobalka Hiiraan.
Inkastoo uu sii xumaanayey xiriirka maamulka Puntland iyo Federaalka, ayaa hadana waa markii ugu horeysay oo deeq ka timid dalka Turkiga dib loo cesho maadaama hay’ada maamuleysa deeqda ee Bisha Cas ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho.
Dhanka maamulka Puntland ayaa isaguna u muuqda mid aan weli ku guuleysan inuu isu dheeli tiro xiriirka aan fiicneyn ee sii kala fogaanaya ee dhaxeeya shacabka iyo Xukuumada Puntland ee wakhtigeedu sii dhamaanayo iyo siyaasada ku aadan Dowlada Federaalka oo aysan xiriir fiican lalaheyn xukuumada Puntland.
Deeqda Raashinka Turkida ayaa deegaanada uu ku sugan yahay maamulka Khaatumo loo soo mariyey dhanka Puntland, waxaana la filayaa in deeq noocaan oo kale oo loo wado Somaliland ay gaarto dekkada Berbera.
Dowlada Turkiga ayaa horey u sheegtay in xiriirka ku aadan deeqaha Soomaaliya ay si toos ah ugu gudbin doonto dowlada Federaalka Soomaaliya oo ay u aqoonsan tahay dowlada rasmiga ah ee Soomaaliya, iyadoo dhamaan deeqaha ka yimaada Turkiga marka hore lasoo mariyo magaalada Muqdisho, kadibna loo qeybiyo gobalada dalka Soomaaliya.
Maamulka Somaliland ayaa horey wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo Madaxweyne Siilaanyo safar ku tagay dalka Turkiga iyagoo ka codsaday in deeqda Somaliland si gaar ah loogu keeno, isla markaana kala hadlay sidii mashaariicda horumarinta ee loogu talo galay gobalada Soomaaliland loogu dabikhi lahaa Barnaamijka Wasaaradooda Qorsheynta u dejisay horumarinta Somaliland.
Daawo Sawiradii laga soo qaadey diyaaradii ku burburtey airport Mogadishu
Dhageyso: Xildhibaan Xasan Abshir oo khalad ku tilmaamey qaabkii DF Somalia u soo dirtey Markabkii Raashinka Wadey